भारतको सपना आपुरै ! अवतरण गर्नुअघि नै सम्पर्कविहीन भयो चन्द्रयान-२ - Experience Best News from Nepal
काठमाडौँ । भारतको चन्द्रमामा टेक्ने सपना आपुरै भएको छ ! अवतरण गर्नुअघि नै सम्पर्कविहीन भयोको छ । भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुर्‍याउने भनेर पठाएको चन्द्रयान-२ को सम्पर्कविहीन भएको हो । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन(इसरो)का प्रमुख के सिवनले चन्द्रमाको सतहमा पुग्न २ किलोमिटर बाँकी हुँदा विक्रम ल्याण्डरसँग सम्पर्क टुटेको बताए।
चन्द्रयान-२ को विक्रम ल्याण्डर गएराति साढे १ बजेदेखि साढे २ बजेको बीचमा चन्द्रमामा अवतरण हुने बताइएको थियो । आफ्ना वैज्ञानिकहरूको उपलब्धी तथा उनीहरूलाई हौसला दिन इशरो पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘चन्द्रयान-२’सँग सम्पर्क टुटेपछि निराश वैज्ञानिकहरूलाई यान त्यहाँसम्म पुग्नु सानो उपलब्धि नभएकोले त्यसमा सानो मन नगर्न भन्दै उनीहरूलाई ढाडस दिएका थिए।
भारतले गत साउन ६ गते अन्तरिक्षमा पठाएको थियो। ४७ दिनअघि भारतले चेन्नईनजिकैको सिरहारीकोट अन्तरिक्ष केन्द्रबाट चन्द्रयान २ लञ्च गरेको थियो। लञ्च हुनुअघि पनि अन्तिम समयमा प्राविधिक समस्या आएको भन्दै समय सारिएको थियो।
चन्द्रयान-२ अवतरण हुने भनिएको ठाउँमा अहिलेसम्म कुनै यान पुगेका थिएनन्। पृथ्वीदेखि चन्द्रमाको दुरी ३ लाख ८४ हजार किलोमिटर छ।चन्द्रयान-२ का लागि भारतले १४.१ करोड डलर लगानी गरेको छ। यसअघि अमेरिका, रूस र चीनले मात्र चन्द्रमाको सतहमा आफ्ना यान अवतरण गराएका छन्।